Monday December 14, 2020 - 12:25:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dadka kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa la sheegay in ay xasuuq daran kala kulmayaan ciidamada Meleteriga Itoobiya ee kasoo jeeda Amxaarada.
Abiy Axmed ayaa lagu eedaynayaa in uu beegsi ku hayo qowmiyadda Tigreega
Barakacayaashii ka cararay xaaladda bani'aaddanimo ee ka jirta gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya ayaa daaha ka rogay xasuuq wadareedyo lagula kacay boqollaal ruux oo xabashi Itoobiyaan ah intii ay socdeen dagaalladii cuslaa ee gobolkaas uu marti geliyay.
Kumannaan ruux oo ku barakacay dagaallada ka holcoya dalka Itoobiya islamarkaana gaaray dalka Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in labada dhinac ee TPLF iyo xukuumadda dhexe aysan unaxariisan dadka rayidka ah waxayna ku kaceen xasuuq aad udaran.
Qaar baa kuwa xasuuqa gaystay ku sheegay in ay ahaayeen ciidanka Melleteriga Abiy Axmed halka kuwa qaarna ay ku sheegeen in ay ahaayeen ciidamada jabhadda TPLF.
Qaxootiga qaarkii oo la hadlay wakaaladda wararka AP ayaa shaaciyay in ay jiraan xabaal wadareedyo lagu aasay boqollaal ruux oo lagu dilay gobolka Tigray ka hor inta aysan kasoo tallaabin soohdinta Itoobiya iyo Suudaan.
Dadka ay wakaaladdu la kulantay oo ahaa dadkii sida dirqiga ahaa kaga soo badbaaday xasuuqa ayaa sheegay in magaalada ugu daran ee ay dhibaatadu ka dhacday ay ahayd magaalada Mai-Kadra ee kulaasha xadka Itoobiya iyo Suudaan.
Tesfaalem Germay oo ka mid ahaa dadkii kasoo barakacay xaaladda adag ee ka jirta Itoobiya ayaa AP u sheegay in uu dhaayihiisa saaray ciidmada Millatariga iyo maleeshiyaadka Axmarada oo madaxyada ka guraya boqollaal ka mida dadkii deegaanka oo ku sugnaa magaalada Mai-Kadra.
"Xitaa ciidamada dowladdu uma maleynayn inaan nool nahay, waxay moodayeen inaan dhamaanteen dhimanna "waxaa sidaasi wakaaladda wararka AP u sheegay qof kale oo kasoo cararay xaaladda ka taagan Itoobiya.
Wakaaladda oo soo xiganaysa qaxootiga qaxa ku tagay dalka Suudaan ayaa sheegtay in ay haleen xabaal wadareedyo badan oo ay si jimaaci ah ugu aasan yihiin boqollaal ruux oo lagu dilay soohdinta labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya.
Saraakiil katirsan kooxaha mucaaradka ah ayaa horay u sheegay in maleeshiyaad Amxaaro ah oo katirsan ciidanka Itoobiya ay aragtida ku tooganayaan qofkii ay arkeen iyagoo qofka udilaya kaliya in uu kasoo jeedo qowmiyadda Tigreega.